Guri | Kirin Jewelry
Sterling dahabka qalinka ee qaabab kala duwan
Shirkada Dahabka ee Kirin, oo u heellan ganacsiga 925 Dahab, sida, 925 Sterling Hilqado Hilqado ah, 925 Jijimooyin qalin ah, 925 silsilado qalin ah., Iwm. Dahabka ayaa ahmiyad weyn siiya daacadnimada iyo sumcadda ganacsiga. Waxaan si adag u xakameynaa tayada iyo qiimaha wax soo saarka ee wax soo saarka. Dhammaan kuwan dammaanadaha dammaanad qaadka ah inay noqdaan kuwo tayo ahaan lagu kalsoonaan karo oo qiimo ku habboon.
Charm 925 Sterling Ubax Qalin CZ Ruby Dhagaha Dumarka oo wata Dahab Madoow 300040
Charm 925 Sterling Ubax Qalin CZ Ruby Dhagaha Dumarka oo wata Dahab Madow 300040 https://www.kirinjew.com
Gaar gaar ah 925 Sterling wareega Wareegga Haweenka oo wata dahab Dahab ah 35802
Gaar gaar ah 925 Sterling wareega Wareega Haweenka oo wata dahab Dahab ah 35802 https://www.kirinjew.com
Biyo Dhoobaya 925 Sterling Qalin CZ oo Lacag Ah Oo Loogu Talagalay Haweeneyda Muuqaalkeeda Laheyd R22 Waxaa La Siiyey 102263
Biyo Dhoobaya 925 Sterling Qalin CZ Qalin ah oo loogu talo galay Haweenay haysata Rhodium La daabacay 102263 https://www.kirinjew.com
Kaliya laser macaamiisha magaca shirkadda ama calaamadda dahabka:
Waxaa ku yaal in ka badan 50,000 naqshadeynta qolkayageena, oo ay ka mid yihiin siddooyin, hilqado, silsilado, silsilado, dugaagado, jibbaallo, jajabyo, xirmooyinka dahabka Waxaad ka dooran kartaa qaababka aad jeceshahay albumkeena dahabka, markii aad amarka bixiso, waxaad u baahan kartaa inaad astaantaada ama magaca shirkadda aad ku dhejiso dahabka.
1) 1.2 milyan oo shey oo awood u leh sanadkii
2) 15-45days waqtiga bixinta
3) Qiimaha ugu fiican ee lagu tartamo
4) In kabadan 50,000 oo naqshadood ah qolka bandhigga
Kirin Jewelry Company waa soo saare, jumladle iyo dhoofiso ku yaal Zhuahai, Gobolka Guangdong, Shiinaha, oo ay la socdaan ilaa 500 oo shaqaale ah, 1.2 milyan oo shey oo awood u leh sanadkii. Waxaan soo saareynaa 925 dahab / dahab naxaas ah oo naqshado kala duwan leh, oo ay ka mid yihiin siddooyin, hilqado, silsilado, silsilado, jijimmo, jibbaarro iyo jeexjeexyo leh dhagaxyo qaali ah oo qaali ah, dhagax macmal ah iyo zirconia cubic ah, dhammaystir wanaagsan oo lacag ah, rhodium, ama madow rhodium, u kacay dahab iyo dahab huruud ah oo dahaadhay.
Qurxintayadu waxay xoogga saareysaa xakamaynta tayada tallaabo kasta oo shaqada dahabka ah. Waxaan ka hortageynaa qaladka sababi kara in dahabkeena aan laga doorbidin ka hor inta aysan gaarin macaamiisheenna.
Nala soo xiriir si aad u hesho qiimo dhimis
Waxaan nahay ilo la isku halleyn karo oo dahab ah taas oo u qalanta inaan tusno macaamiishaada qiimaha leh.
Fadlan si xor ah nala soo xiriir haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Waxaanan rajeyneynaa inaan kuugu adeegno goobteenna ganacsiga.